Zahao ny paikadin'ny votoatinao amin'ny Google Search Console | Martech Zone
Alakamisy 5 martsa 2009 Alakamisy Oktobra Oktobra 23, 2014 Douglas Karr
Fantatry ny olona maro Google Search Console ho an'ny fandefasana tranonkala sy fanamarinana robot raki-daza, Sitemaps ary ny fanondroana anarana. Tsy vitsy ny olona mampiasa ny statistikan'ny fikarohana hahazoana paikady mazava momba ny atin'ny tranokalan'izy ireo.
Navigate ny Antontan'isa> Queries amin'ny fikarohana be indrindra ary hahita takelaka angon-drakitra mahafinaritra ianao:
Eo amin'ny ilany havia amin'ny grid dia ny Fikarohana ambony ho an'ny bilaoginao. Ity dia lisitr'ireo teny fanalahidy na fehezanteny ambony miaraka amin'ny toerana misy ny hafatrao na ny pejy amin'ny valiny.
Eo amin'ny ilany ankavanan'ny tsipika no misy ireo teny tena izy voakitika-amin'ny alalan'ny miaraka amin'ny tahan'ny click-through (CTR). Fampahalalana miavaka ity!
Ireo ve ireo teny lakile irinao hampisehoana ny orinasanao, ny tranokalanao na ny bilaoginao? Raha tsy izany dia azonao atao ny mieritreritra ny atiny ary manomboka mikendry azy mafy kokoa.
Raha apetraka tsara amin'ny teny fanalahidy manokana ianao saingy tsy dia tsara ny statistika tsindrio anao, dia mila miasa amin'ny lohateny Post ianao ary mandefa sombin-tsoratra sy famaritana meta). Midika izany fa tsy manana lohateny sy atiny maharesy lahatra ianao - hitan'ny olona ny rohinao fa tsy manindry azy.
Laharana tsara amin'ny valin'ny fikarohana dia tsy ny fiafaran'ny asanao. Ny fahazoana antoka fa voasoratra tsara ny votoatinao ka ny olona manindry azy io no zava-dehibe kokoa!
Tags: Content Marketinggoogle webmasterpejy ambonyfangatahana fikarohana ambonyWebmaster
Ny Loharanon'ny Blogger
Mar 5, 2009 ao amin'ny 5: PM PM
Tianao ny nandinika bebe kokoa ny fomba fampiasana an'io fampahalalana io. Tsy dia manampy loatra ny fanampian'i GW.